ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းသည် မလေးရှားနိုင်ငံအခြေစိုက် တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်သော အဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အေးရှားလေယာဉ်ကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူးပေါင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘန်ကောက်မြို့ကို အခြေစိုက်၍ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များသာမက ပြည်ပခရီးစဉ်များကိုပါ ပျံသန်းလျက်ရှိသည်။
၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၀၃
ချင်းမိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဖူးခက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဦးသဖောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဟိုက်ရိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Registered office : ၆၀/၁ မွန်ရင်းရင်း အဆောက်အဦး ၃လွှာ, Soi Sailom, Phahonyothin Road, Sam Sen Nai Subdistrict, Phaya Thai District
Tassapon Bijleveld (CEO)
1.99 billion baht(2015)
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းသည် တန်ဖိုးနည်း လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပြီး ယခင်က သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်တွင် အခြေစိုက်ကာ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ ခရီးစဉ်များကို ပျံသန်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့မ စတင်၍ ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ ပြောင်းလဲအခြေစိုက်ခဲ့သည်။
လေယာဉ်အချိန်မှန်မှုအရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းသည် အာရှတိုက်ရှိ လေကြောင်းလိုင်းများတွင် အဆင့်(၃) အချိန်အမှန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ လေယာဉ်ချိန် ၉၆.၀၈% မှန်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းသည ၂၀၀၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ ပြည်တွင်းခရီးစဉ်များကို စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ရှယ်ယာဝေစုပိုင်ဆိုင်မှုမျာ အေးရှားလေယာဉ်ကုမ္ပဏီမှ ၅၅% နှင့် အဲအေးရှား ကုမ္ပဏီမှ ၄၅% ပိုင်ဆိုင်လျက်ရှိသည်။
ဘန်ဂလို အိန္ဒိယနိုင်ငံ BLR VOBL Bengaluru International Airport 
ဘန်ကောက် ထိုင်းနိုင်ငံ BKK VTBS သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ် 
ဘန်ကောက် ထိုင်းနိုင်ငံ DMK VTBD ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် 
Buriram ထိုင်းနိုင်ငံ BFV VTUO Buriram Airport
Changsha တရုတ်နိုင်ငံ CSX ZGHA Changsha Huanghua International Airport
ချန်နိုင်းမြို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ MAA VOMM Chennai International Airport
ချင်းမိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ CNX VTCC ချင်းမိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Chiang Rai ထိုင်းနိုင်ငံ CEI VTCT Mae Fah Luang International Airport
Chongqing တရုတ်နိုင်ငံ CKG ZUCK Chongqing Jiangbei International Airport
ဒေလီမြို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ DEL VIDP အိန္ဒိယ ဂန္ဒီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
ဒန်ပါဆာမြို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ DPS WADD Ngurah Rai International Airport
ကွမ်ကျိုးမြို့ တရုတ်နိုင်ငံ CAN ZGGG ကွန်ကျိုး ပိုင်ယွန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဟန်ကျိုးမြို့ တရုတ်နိုင်ငံ HGH ZSHC Hangzhou Xiaoshan International Airport
ဟနွိုင်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ HAN VVNB နွိုင်ဘိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဟက်ရိုင် ထိုင်းနိုင်ငံ HDY VTSS ဟိုက်ရိုင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဟိုချီမင်းစီးတီး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ SGN VVTS တန်ဆွန်းညက် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်
ဟောင်ကောင် ဟောင်ကောင် HKG VHHH ဟောင်ကောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Khon Kaen ထိုင်းနိုင်ငံ KKC VTUK Khon Kaen Airport 
Kolkata အိန္ဒိယနိုင်ငံ CCU VECC Netaji Subhash Chandra Bose International Airport
ခရာဘီ ထိုင်းနိုင်ငံ KBV VTSG ခရာဘီ လေဆိပ် 
ကွာလာလမ်ပူ မလေးရှားနိုင်ငံ KUL WMKK ကွာလာလမ်ပူ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ကူမင်း တရုတ်နိုင်ငံ KMG ZPPP ကူမင်း ချန်ဆွေ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
Loei ထိုင်းနိုင်ငံ LOE VTUL Loei Airport
မကာအို မကာအို MFM VMMC မကာအို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
မန္တလေး မြန်မာနိုင်ငံ MDL VYMD မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Nakhon Phanom ထိုင်းနိုင်ငံ KOP VTUW Nakhon Phanom Airport
Nakhon Si Thammarat ထိုင်းနိုင်ငံ NST VTSF Nakhon Si Thammarat Airport
Nan ထိုင်းနိုင်ငံ NNT VTCN Nan Airport 
Nanning တရုတ်နိုင်ငံ NNG ZGNN Nanning Wuxu International Airport 
Narathiwat ထိုင်းနိုင်ငံ NAW VTSC Narathiwat Airport
နေပြည်တော် မြန်မာနိုင်ငံ NYT VYNT နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Ningbo တရုတ်နိုင်ငံ NGB ZSNB Ningbo Lishe International Airport
ပီနန် မလေးရှားနိုင်ငံ PEN WMKP ပီနန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဖနွမ်းပင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ PNH VDPP ဖနွမ်းပင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
ဖူးခက် ထိုင်းနိုင်ငံ HKT VTSP ဖူးခက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
Ranong ထိုင်းနိုင်ငံ UNN VTSR Ranong Airport 
Roi Et ထိုင်းနိုင်ငံ ROI VTUV Roi Et Airport 
Sakon Nakhon ထိုင်းနိုင်ငံ SNO VTUI Sakon Nakhon Airport
ရှန်းကျန်း တရုတ်နိုင်ငံ SZX ZGSZ ရှန်းကျန်း ပေါင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
စင်ကာပူ စင်ကာပူနိုင်ငံ SIN WSSS စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်
Surat Thani ထိုင်းနိုင်ငံ URT VTSB Surat Thani Airport
Trang ထိုင်းနိုင်ငံ TST VTST Trang Airport
Ubon Ratchathani ထိုင်းနိုင်ငံ UBP VTUU Ubon Ratchathani Airport
Udon Thani ထိုင်းနိုင်ငံ UTH VTUD Udon Thani Airport
ရှမန် တရုတ်နိုင်ငံ XMN ZSAM ရှမန် ကောင်းချီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ် 
Wenzhou တရုတ်နိုင်ငံ WNZ ZSWZ Wenzhou Longwan International Airport
Wuhan တရုတ်နိုင်ငံ WUH ZHHH Wuhan Tianhe International Airport
Xi'an တရုတ်နိုင်ငံ XIY ZLXY Xi'an Xianyang International Airport 
ရန်ကုန် မြန်မာနိုင်ငံ RGN VYYY ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ စာရင်းအရ အောက်ဖော်ပြပါ လေယာဉ်များဖြင့် ပျံသန်း ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသည်။ လေယာဉ်များမှာ သက်တမ်း ၄.၃ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်သည်။
Airbus A320-200 with Sharklets
ထိုင်းအဲအေးရှား လေကြောင်းလိုင်းသည် လက်စ်တာစီးတီး ဘောလုံးအသင်း၊ ကွန်းပတ်ရိန်ဂျာ အပါအဝင် အခြား ထိုင်းဘောလုံးအသင်းများကိုပါ စပွန်ဆာပေးလျက်ရှိသည်။
↑ AirAsia confirms move to Don Mueang by Oct 1  (25 June 2012)။ 30 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AirAsia opens new hub in Chiang Mai
↑ ၃.၀ ၃.၁ Asia Aviation Annual Report 2014
↑ Join BIG! AirAsia BIG Loyalty Programme
↑ Home Page။ 30 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bloomberg Businessweek: Bijleveld, CEO of Thai AirAsia
↑ ၇.၀ ၇.၁ "TAA, Bangkok Airways post healthy profits"၊ Bangkok Post၊ 2016-02-27။ 27 February 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thai AirAsia To Stay At Suvarnabhumi Airport :: Bernama.com Archived5February 2012 at the Wayback Machine.Wayback Machine.
↑ Maierbrugger၊ Arno (1 July 2013)။ ASEAN’s most punctual airline: Thai AirAsia။ Inside Investor။ 22 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AirAsia | Flight schedule | See all available flight times
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ Main - Business - Congestion drives AirAsia from Suvarnabhumi to Don Mueang @ Mon Jun 25 2012။ Themalaysianinsider.com။7July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thai AirAsia grounds DEL service
↑ AirAsia X Adds Delhi Service from Feb 2016 :: Routesonline
↑ AirAsia to Khon Khaen
↑ AirAsia enhances connectivity to China with Kunming route – BorneoPost Online | Borneo , Malaysia, Sarawak Daily News | Largest English Daily in Borneo။ Theborneopost.com။7July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၆.၀ ၁၆.၁ Thai AirAsia Adds New Domestic Routes from Feb 2015 :: Routesonline
↑ Main - Business - AirAsia gains stronger foothold in China with entry into Nanning @ Tue Sep 11 2012။ Themalaysianinsider.com။7July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 16 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7March 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Thai AirAsia BKK-XMN launch
↑ Archives | The Star Online။ Thestar.com.my (31 July 2006)။7July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ AirAsia X to Launch Kuala Lumpur – Xi’An Service from July 2014 :: Routesonline
↑ "Thai AirAsia Fleet Details and History"၊ planespotters.net။ 1 August 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ထိုင်းအဲအေးရှား_လေကြောင်းလိုင်း&oldid=539887" မှ ရယူရန်
၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။